Abakhiqizi baseMbusweni Ephakathi baye bahlala bekwazi ukuklama amadivaysi athakazelisayo kakhulu emazingeni angokwenkululeko yentando yeningi. Ummeli ojwayelekile walolu hlobo lwezinto zobuchwepheshe, ezihluke kubangaphambili abafanako, naphezu kokuthuthukiswa okuncane kodwa okuphawulekayo, yi-smartphone Yeep F605.
Ukubuyekezwa kwabanikazi bakholelwa ngokuvumelana ukuthi inzuzo enkulu yedivaysi ibhethri enkulu ekhokhelwa kalula ehlinzeka ngokuphila ngokubhebhetheka kwebhethri. Indawo yesibili, futhi okudingekayo kumajaji aseShayina, isuswa intengo - umthengi kwanoma yisiphi isigaba sokuchuma angakwazi ukuthenga ngokuphelele i-smartphone. Esimweni sethu, ithegi yentengo idlala indima ebalulekile, ngakho izindleko ziye zadlala enye yezindima eziyinhloko ekukhuthazeni imodeli emakethe yasendlini yasendlini.
Ngakho, isihloko sokubuyekezwa kwanamuhla yi-Jeep F605 ye-Mega Power yefoni (12000 mAh). Ukubuyekeza, izici, kanye nezinzuzo zegajethi kanye nokungaphumeleli kwayo - ngakho konke lokhu okuqhubekayo.
Ukuklanywa komklamo we-F605 kuhluke kakhulu kunabanye abameleli balo mkhakha - "amafomu" namafomu okuxubha ngokuphelele. Igajethi ibeka ngokugcwele kunoma yisiphi isundu futhi ayizami ukuphuma. Lokhu kubangelwa kakhulu ngobukhulu nesisindo sedivaysi, futhi ukuhlukaniswa kwamasentimitha angu-4.5 kukuvumela ukuba ubize imodeli jikelele, okungukuthi, ifoni ilungile kumfazi onesundu esincane, nendoda.
Ngokuqondene nombala webala, lapha konke akushintshiwe: ububanzi bamadivayisi abanokuvikelwa okuphezulu, bathola umbala ophuzi nohlaza, - akuyona into ehlukile kanye ne-Jeep F605 Mega Power. Impendulo evela kubanikazi mayelana nalokhu ayiphenduli, ngokusobala, abasebenzisi sebejwayele kokubili ukuklama kanye nokukhetha "okucebile" kwemibala.
Izici zobuchwepheshe bokubonisa azikwazi ukuziqhayisa okuthile okuvelele. Ukuhlelwa kwesikrini kungama-pixels angama-854 ngama-480, futhi lokhu akukwanele ukubuka ama-movie nama-movie ngezakhiwo eziphezulu. Noma kunjalo, emisebenzini evamile noma yansuku zonke, isibonisi sikwanele. Izinhlelo zokusebenza ezinkulu kanye nemidlalo "enzima", yiqiniso, hhayi yeJeep F605 yethu.
Impendulo yabanikazi ibeka ukuthi kukhona ikhwalithi ephezulu ye-IPS-matrix, evumela ukukhiqiza isithombe esicebile nesicacile. Isixazululo esincane se-screen, kodwa i-matrix ehlakaniphile ingathuthukisa kakhulu ukusetshenziswa kwamandla wedivayisi.
Ikhamera enkulu inezinga elijwayelekile lezici zayo zesigaba: ama-megapixel angu-5 ne-flash-quality flash. Kodwa, naphezu kwemishini elula, iyakwazi ukwenza isithombe esihle kakhulu futhi idubule ividiyo ebuhlungu.
Ikhamera yekamelo langaphambili lihlukile kusukela ngemuva ngezimpawu ezithobekile kakhulu: ukulungiswa kwe-1.3 MP nokungenazo zonke izintambo. Ngokuyisisekelo, lokhu kuwanele ukushaya izingcingo kwi-Skype noma ukuxhumana kubathunywa bezinkampani zangaphandle, okungukuthi, kuzicelo zokushintshaniswa kwevidiyo. Okuthile okungathí sina ngempela ngokudubula imodeli yethu, alas, akufanelekile, nakuba ngemuva kwe-amateur firmware abanye bangakwazi ukucindezela okuthile okudingekayo kweJeep F605. Izimpendulo zabanikazi kulokhu ziyiqiniso: sathengile ifoni ukuze sikwazi ukubhekana kalula ne-cataclysm, hhayi nge-selfies ekhangayo.
I-chipset esekelwe kwiprosesa yombili-core kusuka ku-mediatech kusukela kumchungechunge we-MTK-6572, osebenza ku-1.2 GHz, unesibopho sokusebenza. Uma ungumdlali wezinhlelo zokusebenza "ezisindayo" namageyimu adingekayo, khona-ke amakhono ocingweni ngeke akwanele. Noma kunjalo, i-graphic accelerator "Mali" 400MM izokwazi ukukujabulisa ngemidlalo elula nomsebenzi ophelele wesofthiwe engavamile.
I-setset ye-chipset, yebo, ayifuni, kodwa lokhu kunikeza intengo ekhangayo kakhulu ye-Jeep F605 (12000 mAh). Impendulo yabanikazi yayizwela kumprosesa obuthakathaka, ngoba inhloso yokuthenga i-smartphone ihluke ngokuhlukile, ngokungafani ne-flagships enamandla yomkhiqizo ofanayo.
Uma imemori eyakhelwe ngaphakathi ku-8 GB ingenakwanele, ungakwazi njalo ukwandisa ivolumu ku-32 GB usebenzisa amakhadi we-SD wesithathu. Amakhadi okukhumbulayo alula ukuxazulula inkinga yokungabi nesikhala semidlalo yokunciphisa, izinhlelo zokusebenza kanye nolunye ulwazi olufana nesithombe nemishini yevidiyo.
Yiqiniso, ukuvikelwa kwedivayisi kufanele kukhulunywe ngokuhlukile. Imodeli ihambelana ngokuphelele ne-standard standard IP68, ihlinzeka igajethi ngokuvikeleka okuhle ngokumelene nothuli, umswakama kanye nokunye ukungcola.
Ngaphezu kwalokho, lo mfanekiso awusabi neze ukuwa ngokuphakama okuncane, futhi kunoma iyiphi indawo, kanye nomthelela wama-reagents amakhemikhali. Uma uya eholidini elide futhi elidlulele, khona-ke inketho ekahle kuyoba yiJeep F605. Ukubuyekezwa komsebenzisi kugcwele izindumiso zamandla, ukuqina nokuphila kwebhethri yedivayisi. Isibonelo asigcini nje ngokukusindisa ezinkingeni ngokuvikela igajethi, kodwa futhi ikuvumela ukuba ukhohlwe ngokushaja izinsuku ezimbalwa, noma ngisho namasonto.
Iparele phakathi kwezinye izici zedivayisi yiyona impilo yebhethri ye-Jeep F605. Izimpendulo zabanikazi zigcwele ukuphazamiseka nokumangala esikhathini eside kangaka sokuthi "ukuphila" kwedivayisi. Kokubekwe eceleni, imodeli iyakwazi ukusebenza ku-oda lamahora angu-2,000 (!). Izingxoxo eziqhubekayo zanele amahora angaphezu kuka-50 kumanethiwekhi we-2G. Ukufakwa kwe-3G, isibonakaliso sincane kakhulu futhi sinamahora angaba ngu-36.
Njenge-spoon-spoon, ungaphawula isikhathi eside sokufaka kabusha ibhetri. Kodwa umthamo omkhulu onjalo awukwazi kodwa ukhathaza: ibhethri igcwele ngokugcwele inethiwekhi ye-220 V engekho ngaphambi kwamahora amathathu.
Lo modeli uthatha indawo efanelekile futhi ephakeme endaweni engxenyeni yezinsimbi ezihamba phambili "ezinesikhathi eside" ezinekrini lokuthinta nokuvikelwa kwekhasi le-IP68. Izici ezinenzuzo kunazo zonke emncintiswaneni obunzima futhi obunzima walesi sigaba zanikezwe ummangalelwa ngamathegi wamanani, kanye nezinkomba zayo ezikhululekile nezi-ergonomic.
Le foni ayihloselwe izimila ehhovisi elizimele noma efulethini elifudumele. Umsebenti wakhe uhambo olude nolwedlulele endaweni ethile "esihogweni se-kurichiki" noma ekudlukeni kolwandle ngaphandle kokwesaba "ukondla" i-smartphone ngesihlabathi nangodaka. Ngokuvamile, batusa igajethi kubantu abathintekayo emidlalweni esebenzayo noma sebenzisa isikhathi esiningi ngaphandle kwedolobha.
Inani elilinganiselwa cishe ngama-ruble angu-9000.
I-Smartphone-level LG Leon: izichaso, izici, ukubuyekezwa kanye nenani
I-HTC Isifiso 300: ukucaciswa, izithombe nokubuyekezwa
Indlela yokudlulisa i-Inthanethi kusuka efonini kuya kwikhompyutha ngezimo zanamuhla